short url Archives - DigitalMarketing.com.mm
Branding Digitalized SMS Marketing Website Development
6 Reasons to use URL Shorteners
URL Shorteners (Link အတိုကောက်) တွေကို ဘာကြောင့်သုံးသင့်တာလဲ။ အရင်ဆုံး URL Shorteners တွေဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။ URL Shortener အတွက် အလွယ်ဆုံးရှင်းလင်းချက်ကတော့ – ပုံမှန် URL (တနည်း) Website Link တွေကို အသုံးပြုရအဆင်ပြေအောင် အတိုချုံးထားတဲ့ Link တွေကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Normal URL – https://example.com/assets/category_B/subcategory_C/Foo/ – https://en.wikipedia.org/wiki/URL_shortening URL Shortener – https://example.com/Foo – https://w.wiki/U ဒီလို Link အတိုကောက်ဖြစ်တဲ့ URL Shorteners ‌တွေကို ဘာကြောင့်သုံးသင့်တာလဲ။ ဘယ်နေရာတွေမှာ ဘာကြောင့်အသုံးဝင်တာလဲဆိုတာ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ 1. Links တွေကို ပိုပြီးထိန်းချုပ်ရလွယ်ကူစေတယ်။ […]
Facebook Marketing Service သုံးလ ရယူလျှင် Professional Website ရေးဆွဲ ဖန်တီးခြင်း (တစ်နှစ်စာ 100% အခမဲ့) နှင့် Messenger Marketing ဝန်ဆောင်မှုတို့ကို အခမဲ့ ရရှိနိုင်မည်။
DigitalMarketing.com.mm နဲ့ လက်တွဲပြီးသင့်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ထုပ်ပြလိုက်ပါ။
Creativity & Visual Design (1)
advantages of ecommerce benefits of ecommerce website Branding Digital Marketing Digital Marketing Agency digital marketing agency in myanmar digital marketing in myanmar Ecommerce Ecommerce in Myanmar Ecommerce Website ecommerce website in myanmar Marketing Channels Online Business Open More Online search engine optimization seo seo agency myanmar seo myanmar short url sms marketing url shorteners Website Creation Website Design Website Development Web Technology
No. 85, Moe Thauk Pan Street,
Su Paung Housing, Htu Par Yone (1) Ward,
Tharkayta Township, Yangon.
(+95) 09 4210 140 55
© Copyright 2020. All Right Reserved & Powered by Hap Eye Co., Ltd.